Global Voices teny Malagasy » Okraina: Tantara Iray Mampalahelo Avy Amin’ny Fiainan’ireo Marary Manaraka Fitsaboana Fampienàna Fanaintainana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Jona 2018 16:00 GMT 1	 · Mpanoratra Maryna Reshetnyak Nandika miora
Sokajy: Mediam-bahoaka, Drop-in Center
Vao haingana, blaogera Okraniana roa no nifantoka tamin'ireo olan‘ny fampihenana vokadratsy . Ireo mpampiasa ny Livejournal, depo3p  sy zpt_users,  dia namerina nandefa tantara iray mikasika marary momba ny opiate replacement therapy  (ORT) (fitsaboana fanolo ho an'ny rongony mahery) avy ao an-tanànan'i Shostka . Hita ho tena niaritra ny aretina ilay marary, ary na eo aza ny zavamisy hoe ny fitondrantenany no tena antony lehibe nahatonga an'io olana io, nanao izay azony natao ireo marary hafa hanampiana azy.
Ny blaogera vovan9619  no namoaka voalohany ny tantara. Toy izao no nalefany :
Mirary andro finaritra ho an'ny rehetra. Te-hizara fotsiny ny vaovao mikasika ny toeranm-pandraisanay ORT sy ireo marary aho. Misy zazalahy atao hoe Lesha eto an-tanànanay, miara-manatrika ny fandaharana izy sy ny vadiny. Manan-janaka vavikely izy ireo … Maka fanafody izy efa ho herintaona izao, ary ny vadiny vao fotoana vitsy monja. Roa herinandro lasa izao, tsy nahatratra ireo ora fisokafan'ny toeram-pandraisana izy (noho ireo antony azy manokana ) ary niverina tao amin'ny an-toerana indray ora iray taorian'ny nikatonany. Mamo izy ka tsy azony an-tsaina hoe nahoana izy no tsy mahazo mihinana fanafody . Nandà tsy nety nanome azy an'io ny lehiben'ny mpitsabo mpanampy. Nony avy eo nokendainy itsy farany, tsy fantany intsony izay nataony… ny andro manaraka voaroaka tao anaty fandaharanasa izy ary nanao tatitra ilay mpitsabo mpanampy niampanga azy ho namono azy.
Tao anatin'ny andro vitsivitsy, nanomboka niahiahy momba ny amin'i Lesha sy ny vadiny ireo hafa marary ao amin'ny ORT ary nanapa-kevitra ny hitsidika azy. Hitan'izy ireo i Lesha tena efa marary mafy, mamo sy ao anatina soritr'aretina tena henjana. Nanapa-kevitra ny hanampy azy izy ireo. Nanoratra  i Vovan9619 fa:
Andro vitsivitsy taty aoriana nandefa ny ampahany faharoa tamn'io tantara io ireo blaogera ary tsy tantara tsara fiafaràna izany. Nandefa  ny Vovan9619 fa:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/15/121131/
 ‘ny fampihenana vokadratsy: http://en.wikipedia.org/wiki/Harm_reduction
 opiate replacement therapy: http://en.wikipedia.org/wiki/Opioid_replacement_therapy